नेपालमा दुव्र्यसनको चुनौती | Bishow Nath Kharel
नेपालमा दुव्र्यसनको चुनौती
Posted on June 27, 2017 by bishownath
विश्वभरिको लागूऔषध दुव्यर्सनको समस्यालाई एकताबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्न प्रत्येक वर्षको २६ जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय दुव्यर्सनविरुद्धको दिवस मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९८७ मा भएको साधारण सभाले २६ जुनलाई दुव्यर्सनविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । विकसित देशमा भन्दा विकासोन्मुख देशमा बढी मात्रामा दुव्यर्सनीहरू पाइन्छ । विज्ञहरूका अनुसार ती देशमा दुव्र्यसनीहरू बढ्नुमा फितलो कानुन, सरकारी अनुगमनको कमी, रोजगारीको अभाव, अशिक्षा, गरिबी र जनचेतनाको कमी जस्ता मुख्य कारण देखिएका छन् ।
हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने पनि संसारका अन्य देशझैं दुव्यर्सन गैरकानुनी हो । तर संसारका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि दिनानुदिन दुव्र्यसनको समस्या बढ्दो छ । आखिर कहाँ छ त ? यो लहरोको पहरो ? किन थामिँदैन यसको आपूर्ति ?
मुलुककै विभिन्न भागमा गाँजालगायत यस्ता लागूपदार्थ खेतीमा सरकारले कुनै किसिमको कडा कानुन बनाएर लागू गर्न सकेको पाइँदैन । छिमेकी देशलगायत अन्य मुलुकबाट आयात गरिएका लागूऔषध, हरेक दिन गल्लीगल्लीमा बेचिन्छन् र सरकारको मौनताले यस्ता क्रियाकलापले झाँगिने मौका पाइरहेको छ । यसर्थ लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष ११ प्रतिशतका दरले देशभर लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि भएको देखाएको छ । अहिले देशभर कडा किसिमको लागूऔषध सेवन गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ४१ हजार ८ सय ३४ जना छ । २ लाख प्रयोगकर्ता दुव्र्यसनीबाट निस्कनै नसक्ने गरी फसिसकेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यसरी लागूऔषध प्रयोग गर्नेहरूमा १५ देखि २५ उमेर समूहका युवापुस्ता बढी छन् । सुई प्रयोगकर्ताको संख्या ५२ हजारको हाराहारीमा छ । पछिल्लो समयको प्रवृत्ति हेर्दा पुरुषभन्दा महिला लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या थपिँदै छ । कुल लागूऔषध प्रयोगकर्तामध्ये १० प्रतिशत महिला रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
देशमा गाँजा, अफिम र फर्मास्युटिकल ड्रग प्रयोग गर्नेको संख्या बढी छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भएका औषधि पसलमा समेत अहिले सजिलै लागूऔषध पाउने भएकाले पनि प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी र सजिलै पैसा कमाउन सक्ने थलो लागूऔषध कारोबार बन्दै गएको छ । २०३३ मा लागू भएको ऐन अहिलेसम्म परिमार्जित नहुँदा कामकारबाहीमा समेत समस्या छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा हुँदै लागूऔषधमा पर्ने गरेको देखिएको छ । घरपरिवार र विद्यालयका शिक्षकले गरेको धूमपान र मध्यपानले पनि युवापुस्ता अम्मली बन्ने गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ६० जना सरकारी विद्यालयका शिक्षकमा गरिएको सर्वेक्षणमा ५० शिक्षकले मदिरा सेवन गर्ने गरेको र आधाभन्दा बढीले सुर्तीजन्य पदार्थ खाने गरेको पाइएको सोही मन्त्रालयले जनाएको छ । यसर्थ यी विभिन्न तथ्यांकका आधारमा घरपरिवार र विद्यालयका शिक्षकबाट नै सुधारको कदम नचालिए देशमा दुव्र्यसनीको संख्या कम हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । लागूऔषधबाट छुटाउन देशभर १ सय ५० वटा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर यस्ता केन्द्रमा उपचारका लागि १० प्रतिशत मात्र दुव्यर्सनी पुग्ने गरेको नार्कोनन नेपालका सञ्चालक वसन्त कुँवरको भनाइ छ । कुँवरका अनुसार नेपालमा ४ देखि ५ लाख मानिसले लागूऔषध सेवन गर्छन् । पछिल्लो समय १० प्रतिशत युवतीले प्रेमीबाट औषधि सेवन गर्ने गरेको उनले बताए । विद्यालयस्तरमै लागू औषधसम्बन्धी विषय समेटिए प्रयोगकर्ताको संख्या कम गर्न सकिने बताउँछन् उनी । लागूऔषध प्रयोगकर्तामा ६० प्रतिशत चिकित्सक र ५० प्रतिशत इन्जिनियरसमेत रहेको उनले बताए ।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष ११ प्रतिशतका दरले देशभर लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि भएको देखाएको छ । अहिले देशभर कडा किसिमको लागूऔषध सेवन गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ४१ हजार ८ सय ३४ छ । २ लाख प्रयोगकर्ता दुव्र्यसनीबाट निस्कनै नसक्ने गरी फसिसकेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ
देशमा थुप्रै सुधार केन्द्र खुले पनि दुव्यर्सनीहरूको संख्या भने दिन प्रतिदिन झनै बढ्दो देखिन्छ । यसर्थ सम्पन्न परिवारका मानिस मात्र नभई समाजका होनहार आशालाग्दा युवाहरू लागूऔषधको कुलतमा फसेका छन् । साथीसंगत, समय, चाह, फेसन, बिछोड, सम्पन्नता, गरिबी र बाटो बिराएको जस्ता दुव्र्यसनका धेरै कारण देखिए पनि दुव्यर्सनविरुद्ध समाज, राष्ट्र अनि विश्व अझै प्रभावकारी रूपमा एकजुट हुन सकेको छैन । दुव्र्यसनमा लाग्नेलाई पहिले नसा नै जीवनजस्तो लाग्छ । तर जीवनको खोजीमा नसामा डुब्दै जाँदा जीवन बिलाएर उसको पोल्टोमा नसा मात्र बाँकी रहन्छ ।
पवित्र धार्मिकस्थल पशुपति क्षेत्र काठमाडौंमा नसाजन्य पदार्थ सुँघेर बेहोसीमा रमाउने कलिला युवदेखि तारे होटलमा नसाजन्य लागूऔषधमा डुब्ने पुँजीपतिसम्म, एक चिलिम गाँजा माग्नेदेखि ओखती पसलमा सामान्य रोगका औषधि धेरै खरिद गरी सेवन गरेर सुत्नेसम्म दुव्यर्सनका स्वरूप अनेक छन्् । कोही डर भगाउन त कोही सिर्जनात्मकता बढाउन सेवन गर्ने गरेको बयान दिन्छन् । तर यथार्थ त के हो भने दुव्यर्सनीले दुव्यर्सनसँगै जीवन पनि खाइरहेको हुन्छ, छोटो अवधिमै सकिने गरी । दुव्यर्सनलाई बिमारीका रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यस्तो बिमारी जहाँ दुव्यर्सनीको दिमागका न्युरनेन कुनै रसायन या लागूऔषधको प्रयोगसँगै चल्छन् । यी लागूऔषधको प्रयोगले दुव्यर्सनीको सोच, निर्णय, सम्बन्ध र मानसिकतामा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । यस्ता लागूऔषधीहरूको उपलब्धताका लागि दुव्यर्सनी जेजस्तै अपराध गर्न पनि पछि पर्दैनन् । अतः जंकी हुने चक्करमा धेरै नेपालीका छोराछोरी दुव्यर्सनको कुलतमा फस्न पुगेका छन् । संसारकै चित्रमा पनि लागूऔषधको कारोबार संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ । जंकी भन्ने शब्द हामी माझ धेरै चर्चित छ । यसको शाब्दिक अर्थ भने ‘लागूऔषधको दुव्यर्सन गर्ने लापरबाह व्यक्ति’ भन्ने बुझिन्छ ।
सन् २०११ देखि २०१७ सम्म आइपुग्दा कुल १७ हजार ४ सय ८४ लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्नहरू पक्राउ परेका छन् । प्रयोगकर्ता बढेसँगै लागूऔषध कारोबारमा संलग्नहरू पनि पक्राउ परिरहेका छन् । तर यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा मुख्य नाइकेभन्दा पनि भरियाहरू बढी रहेको प्रहरीको तथ्यांकले बताउँछ । अतः प्रहरीले लागूऔषध कारोबारीको जरैसम्म पुग्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह पक्राउ परेको छैन । त्यसैगरी सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी ३ हजार ६ सय ९६ जना कारोबारी पक्राउ परेका छन् । यसरी पक्राउ पर्नेमा १ सय १३ जना भारतीय छन् भने २६ जना अन्य देशका नागरिक छन् । त्यसैगरी सन् २०१७ को मार्चसम्ममा ७ सय ६७ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
सन् २०११ मा २ हजार १ सय ७४, २०१२ मा २ हजार ६ सय, २०१३ मा २ हजार ६ सय ७३, २०१४ मा २ हजार ९ सय १८ र २०१५ मा २ हजार ६ सय ५६ लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न र प्रयोगकर्ता पक्राउ परेको तथ्यांक छ । यसरी कुनै पनि देशले दुव्र्यसनसम्बन्धी जटिल समस्यालाई समाधान गर्न कडाभन्दा कडा ऐन र कानुन तर्जुमा गरी युद्धस्तरमा बेलैमा सचेत भई सम्बन्धित क्षेत्रले दरिलो पाइला चाल्नुपर्नेमा कसैको पनि दुईमत नहोला ।
Source : http://rajdhanidaily.com/2017/06/27/41529/740313.